Sida loo: Beddelayo Sawirka Galitaanka Hotot | Laga soo bilaabo Linux
Sida loo: Beddelayo Sawirka Galitaanka ee Hotot
Arrintan Sida loo waxaan beddeli doonaa muuqaalka caadiga ah Kulul loogu talagalay GNU / Linux, waxaan uga gudbi doonnaa tan:
Dhinac la mid ah macmiilka Windows:
Hagaag, aan tagno shaqada: D:
Kala soo bax Hotot-ka macmiilka Windows-ka
Si aad u soo dejiso Hotot ee Windows waxaad isticmaali kartaa xiriirka soo socda: Ma waxaad u raadineysaa macmiil la qaadan karo oo furan OpenSource ee Twitter iyo Identi.ca ee Windows? Hotot ayaa ah bedelka.
Kala fur faylka hotot_for_windows.zip
Marka aan soo dejino feylka, waxaan galnaa galka meesha uu ku yaal waxaanan sii wadeynaa inaan kala furfurno faylka .zip
Tallaabadani waxay soo saartaa fayl la yiraahdo hotot.
U orod baare faylkayaga asal ahaan.
Halkaa markay marayso, waxaan fureynaa terminal waxaanan qoreynaa:
Hagaag, waxaan aadeynaa galka cusub ee la abuuray (hotot):
Waxaan helnaa waxyaabaha ku jira galka la yiri:
Faylal badan ayaa soo muuqan doona, laakiin xaaladdan mida na xiisaynaysaa waa share, waxaan helnaa tan:
Sida aad u jeeddo. waxaan mar kale helnaa galka la yiraahdo hotot, waxaan nuqul ka qaadnaa galka oo dhan waxaanna tagnaa:
Buuggan gudihiisa waxaan ku raadineynaa galka hotot, waxaan magaca ugu bedelnay hotot2 (kani badiyaa waa keyd ahaan), hadda, waxaan ku dhajineynaa galka aan horay u soo guurinay, iyadoo sidan ah:
Haddii Hotot kuu furmi lahaa ka hor intaadan sameynin isbeddeladan, waan xiri doonnaa. Waxaan fureynaa 'Hotot' iyo shaashadda soo-galitaanka cusub waa inay muuqataa:
Hadda waxaan kaliya u baahanahay inaan galno.
Gelitaankani wuxuu ka soo jeedaa weydiinta saaxiibkeen Mauricio iyo soo jeedinta lamaanahayga KZKG ^ Gaara, sidaa darteed aniguba waxaan u huraa :).
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » GNU / Linux » Sida loo: Beddelayo Sawirka Galitaanka ee Hotot
Adoo jidka ku jira, weydii qof walba: Markii hore, ogeysiisyada 'Hotot' ma aysan u shaqeyn si sax ah, isbeddelkan waa la shaqeysiiyay, kani ma runbaa mise midkood ayaa si caadi ah u shaqeeyay?
Ogeysiisyadu had iyo jeer way iiga shaqeyn jireen aniga, haddii ay waxtar leedahay in la ogaado 😛
Thanks ^. ^, Taasi waa sababta aanan ugu darin maqaalka, ma aanan hubin 100
Uma heli karo inaan ku xirnaado sabayon, durba way rakibtaa wax walbana xitaa wuxuu la soo baxaa sawirka asalka ah isagoon waxba qaban laakiin ma xirmo
Hubi waqtiga nidaamkaaga, inuu sax yahay, iyo sidoo kale aagaaga waqtiga 😉
Khaladka soo baxa ayaa ah in uusan heli karin astaamaha marin u helka iyo wax fikrad ah waxa ay noqon doonto
Fadlan ma bixin kartaa macluumaad dheeri ah? In uusan helin fikradda 😉
Waxay sheegaysaa inaysan heli karin calaamadda marin u helka taasi waa qaladka muuqda
Tag Xulashada Kulul »Akoon oo guji badhanka oranaya: Ku soo cesho Helitaanka Token bogga Twitter.
Waayahay, markaa waxaan u malaynayaa ka hor intaadan samaynin muuqaalka isbeddelka, inaad si caadi ah u soo geli karto. Hadday sidaas tahay, hubi waxa rukhsadaha leh fayllada iyo faylasha galka «hotot» ee ku jira / usr / share, milkiiluhu waa inuu noqdaa xidid ruqsadna haysta Akhris iyo qoraal, kooxaha iyo kuwa kale, rukhsadaha: akhri oo kaliya.
Haddii aysan haysan rukhsadyadan, samee isbeddellada ku habboon;).
Ma xasuusto calaamadda aan ku arkay barnaamijkeeda, laakiin waxay u ahayd twitter-ka, arrintu waxay tahay in barnaamijka aan u maleynayo inay ku siiso xoogaa xiriiriyaha twitter-ka ah inuu ku siiyo furaha, waxaad ku qortaa nuqulada / koollada muhiimka ah barnaamijka. taasna waa inay marin u leedahay koontadaada twitter, ama waxay ka timid aqoonsiga ...
Maxaa ka jira Token si sax ah ayaa loogu arki karaa gudaha Kulul ????
Elav ma heli karo waxaad tilmaamtay
Noocyadii ugu dambeeyay ee hotot waxaa horey u jiray aragti cusub oo ku jirta daaqadaha iyo chrome. 🙂
Wanaagsan, laakiin waxaan jeclaan lahaa inaan ogaado sida loo sameeyo Python ixtiraamka codsiyada asalka ah (kiiskan midori webka midori), si looga furo xiriiriyeyaasha hotot (had iyo jeer furo Firex, xitaa haddii habka ugu dambeeya uu yahay midori)
Waan cadeeyay, waxaan isticmaalayaa Xfce
Waxaan halkan ka soo dhejiyaa hotot - http://www.hotot.org/downloads#linux oo uma baahnid inaad wax ka beddesho si qaybtaasi u bilowdo - http://dl.dropbox.com/u/38581269/Hotot_022.png
Wanaagsan !! waxay ahayd mid qumman. Aad baad u mahadsantahay.
@Michel y @rafuru Haa, labaduba waa sax, kahor intaan galin gelitaankan waxaan ku arkay barta ay kuleeyihiin inay soo sheegaan qaabkan cusub, soo galintani waxay u badnayd kuwa aan wali cusbooneysiin nooca hotot waa diirkooda;). Sikastaba, waad ku mahadsantahay caarada.
Midnimada HP Mini Netbook